काठमाडौं । रेनल्ड गाडीमा उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक शुल्क उठाइ ठगेको समाचार नेपालआजले सम्प्रेशण गरे लगत्तै कम्पनीले ‘मान्छे’ पठाएर सञ्चार माध्यम बन्द गरिदिने धम्की दिएको छ । नेपालका लागि रेनल्ड गाडीको आधिकारिक बित्रेता एड्भान्स ...
६ नम्बर प्रदेशबाट केन्द्र सरकारमा को बन्ला मन्त्री ?, सुर्खेतका सांसदको यस्तो दाबी (भिडियो)
काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि ६ नम्बर प्रदेशलाई विशेष चासोको साथ हेर्न थालिएको छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनले भरिपूर्ण यस क्षेत्रलाई अझै दुर्गम क्षेत्रको रुपमा चिनाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो त प्रदेश ...
सडकमा भेटिएका कविको झटारो: विश्वभर कानुन हुन्छ सबैभन्दा ठूलो, नेपालको अन्धो सरकार भ्रष्टाचारमा भुल्यो (भिडियो)
काठमाडौं । युद्ध र जनआन्दोलनको बलले स्थापित गरेको लोकतन्त्रमा पनि आम नागरिक खुसी छैनन् । व्यवस्था फेरि पनि अवस्था नफेरिँदा जनआक्रोश झनै चुलिएको हो । सुशासन र सुव्यवस्था कायम हुन नसक्दा पहाड, ...
काठमाडौं । माल्दिभ्समा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर विश्वशक्ति मुलुकहरुबीच कुटनीतिक तनाव बढेको छ । खासगरी चीन, भारत र अमेरिका यसमा आकर्षित भएका छन् । उनीहरुको त्रिपक्षीय द्धन्द्ध मन्द गतिमा लम्बिँदैछ । ...
एमालेका युवा नेता गोपाल वम भन्छन्ः ६ नम्बर प्रदेशले सिंगो देश पाल्छ अब (भिडियो)
काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता गोपाल बहादुर वम सम्भवतः पर्यटनमन्त्री पदको दावेदार हुन् । पर्यटकीय जिल्ला मुगुबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएपछि नै उनलाई भावी पर्यटन मन्त्रीको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । पर्यटन ...
काठमाडौं । राज्य सञ्चालनको तहमा भएका अधिकांश निर्णयबारे जनता बेखबर छन् । राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरुबीच हुने छलफल र बहस पनि धेरैलाई जानकारी नै छैन । वाम एकता अभ्यासमा केही नेताहरुबीच हुँदैआएका ...
डम्बर खतिवडाको खँदिलो बहसः माओवाद ग्रन्थ हैन, पुरानै जबजको सान्दर्भिकता छैन (भिडियो)
काठमाडौं । तीन शताब्दिदेखि विश्वभर बहसको विषय बन्दैआएको समाजवादको सान्दर्भिकता झनै प्रगाढ बन्दैआएको छ । अध्येताहरु यसबारे निरन्तर बहसमा छन् । ‘कम्युनिष्ट’ बाहुल्य नेपालको संविधानसभाले त ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर संविधानमै उल्लेख गरेको ...
नेपाली नेताको उत्तर कोरिया अनुभवः यस्तो पो वास्तविकता ! (भिडियो)
काठमाडौं । उत्तर कोरिया एक रहस्यमय मुलुक हो । यस्तो लाग्छ कि, विश्व समुदायबाटै अलग छ यो देश । ‘उत्तर कोरियाका सबै जनता भोका–नांगा छन्’ भनी प्रचार जे हुन्थ्यो, ती सबै ...
काठमाडौं । विगत २० वर्षयता ‘ग्रेटर नेपाल’ अभियान निरन्तर छ । यसको अगुवा हुन्, फणिन्द्र नेपाल । यो खासगरी भारतले मिचेको पुरानो नेपालको भू-भाग फिर्ता पाउने अभियान हो । तत्कालीन् बेलायती ...
लालबाबुलाई राजपाका नेताले यतिसम्म भन्दा पनि हाँसिरहे हेर्नुस् (भिडियो)
काठमाडौं । तुलनात्मक रुपमा गृह, अर्थ, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास जस्ता मन्त्रालयमा अनियमितता हुँदा राज्यलाई बढी हानी हुन्छ । र यीनै मन्त्रालयमा प्रभावकारी काम गरेरै समग्र विकास सम्भव छ । लालबाबुका ...
काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्री लालबाबु पण्डित मोरङमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग चुनावी प्रतिष्पर्धा गरिरहँदा ‘को हो लालबाबु म चिन्दिन’ भन्दै शेखरले सतही टिप्पणी गरेछन् । लालबाबुले शेखरलाई चुनावमा हराएपछि मिठाइ लिएर साइकलमै ...
लालबाबु पण्डितलाई किन खुम्च्याइयो जनसंख्या मन्त्रालयमा ? (भिडियो)
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित दोस्रो पटक मन्त्री बनेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा ब्यापक चर्चा कमाएका पण्डित यसपटक जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीको रुपमा नियुक्त भए । ‘उनलाई यसपटक ...
काठमाडौं । मानवअधिकार अभियन्ता तथा नागरिक समाजका अगुवा सुवोधराज प्याकुरेल खरो वक्ता हुन् । राज्यका गतिविधिलाई औंल्याउँदै आलोचनात्मक बिचार राख्छन् । मानवअधिकार, सुशासन र सदाचारको पक्षमा प्याकुरेल प्रष्ट छन् । नेपालआजले स्टुडियोमा ...
पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख भुसालका गोप्य कुरा: हेमा मालिनीबाट प्रभावित (भिडियो)
काठमाडौं । हँसिलो चेहरा, फरासिलो बोलीचाली । प्रष्ट धारणा राख्ने शैली युवराज भुसालको आफ्नैपन हो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल गुल्मीमा जन्मिएर हुर्किए । पोखराको पिएन क्याम्पसमा पढे ...
काठमाडौं । माक्र्सवादी शौन्दर्यशास्त्री तथा लेखक हस्तबहादुर केसी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीमा आवद्ध छन् । माओवादी केन्द्रले क्रान्तिलाई बिर्सेको भन्दै उनीहरु अबको क्रान्तिको जिम्मेवारी आफ्नै दायित्व भएको बताउँदैआएका छन् । यद्यपि ...
केशव स्थापितका एक्सक्लुसिभ योजनाः हाम्रो नमुना सहरमा विश्वभरका मान्छे प्रेम गर्न आउँछन् (भिडियो)
काठमाडौं । सहरी विकासका विज्ञ मानिन्छन् केशव स्थापित । उनको त्यही विज्ञताका कारण प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले उनलाई भुमिसुधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्ति गरेको छ । नवनियुक्त मन्त्री स्थापितले नियुक्ति ...
पशुपतिनाथ मन्दिरमा भारतीय बाबाको चर्तिकला (भिडियो)
काठमाडौं । हिन्दु धर्मावलम्बीको महान् चाड शिवरात्री मंगलबार पशुपतिनाथसहित देशभरका शिवालयमा धुमधामका साथ मनाइँदैछ । यस पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पूजाको लाईन बस्नेहरुको भीड मात्रै छैन । छेउमै छन् थुप्रै संन्यासी बाबाहरु ...
काठमाडौं । वाम एकता अझै टुंगो लागेको छैन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका मुख्य नेताहरु यही विषयमा भेटवार्ता जारी राखेका छन् । दुई दलका नेताहरुले वाम एकताको विकल्प नै नरहेको बताउँदैआएका ...
सफल उद्यमी कृष्णप्रसादको आह्वानः किन जानुन्छ विदेश ?, आउनुस् हामी दिन्छौँ जागिर (भिडियो)
काठमाडौं । गाडी तथा सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ईन्जिन आयललाई लूब्रिकेन्ट्स भनिन्छ । आफैँमा चिल्लो पदार्थ हो यो । सोही पदार्थ उत्पादन, बिक्री गर्ने व्यवसाय हो लूब्रिकेन्ट्स व्यवसाय । बोलिचालीको भाषामा मोबिल पनि ...
चित्रबहादुर केसीको संशय: दूलही भित्र्याउँदैमा बैबाहिक सम्बन्ध सप्रियो भन्न कहाँ मिल्छ ?
काठमाडौं । ‘संघीयता चाहिँदैन’ भनी आवाज उठाउँदैआएका नेता चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले पछिल्लो चुनावमा पराजय ब्यहोर्नुपर्यो । मुलुकमा संघीयता लागू भइसक्दा पनि केसी यसको विरोधमै छन् । यतिसम्म कि, ...